The Ab Presents Nepal » सुनौलो सपना लिएर साढे चार वर्षअघि दक्षिण कोरिया पुगेका २४ वर्षीय बिमन राईको शव मंगलबार स्वदेश ल्याइयो!
सुनौलो सपना लिएर साढे चार वर्षअघि दक्षिण कोरिया पुगेका २४ वर्षीय बिमन राईको शव मंगलबार स्वदेश ल्याइयो!
छोराको शव लिएर मंगलबार अपराह्न त्रिभुवन विमानस्थल आइपुगेका उजिरबहादुरले भने- “मेरो छोराले जस्तो कसैले अर्काको देशमा ज्यान गुमाउन नपरोस्” ।
गणेश राई:काठमाडौँ -: सुनौलो सपना लिएर साढे चार वर्षअघि दक्षिण कोरिया पुगेका २४ वर्षीय बिमन राईको शव मंगलबार स्वदेश ल्याइपुर्‍याइएको छ । ओखलढुंगा सेवा समाज दक्षिण कोरिया र दूतावासको पहलमा शव ल्याइएको हो । ओखलढुंगाको मानेभन्ज्याङ–६ हिलेपानीका उनी चार वर्षअघि ईपीएसमार्फत रोजगारी गर्न कोरिया पुगेका थिए ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा मंगलबार ल्याइपुर्‍याइएको बिमन राईको शव ।यो समाचार गणेश राईले लेखेका कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ।
हिलेपानी सेवा समाज दक्षिण कोरियाका अध्यक्ष पचुराम राईले टेलिफोनमा बताएअनुसार बिमन सबैखाले मेसिनमा काम गर्न जान्दथे । ‘सायद ओभर कम्फिडेन्सले दुर्घटनामा परे,’ उनले भने । कोरियामै कार्यरत र हाल छुट्टीमा नेपालमा रहेका लयसिंह राईका अनुसार बिमनको कोरियामा बस्ने अवधि करिब दस महिना बाँकी थियो । ओखलढुंगा सेवा समाज कोरियाका उपाध्यक्ष फणीन्द्र अधिकारीले बिमनको परिवारले पाउनुपर्ने क्षतिपूर्ति र कम्पनी साहुबाट पाउनुपर्ने राहत दिलाएको बताए । परिवारका सदस्य आउजाउका निम्ति कम्पनीले नै सम्पूर्ण खर्च बेहोरेको छ । कम्पनीले बिमा सञ्चयकोषबापत रकम दिलाएको छ । कोरियामा रहेका नेपालीबाट ११ लाख वन राहत उपलब्ध गराएको समाजले जनाएको छ ।
यो समाचार गणेश राईले लेखेका कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ।
प्रकाशित मिति July 3, 2019